Awoodda Ciidanka Somalia: Wax ka ogow dalalka Afrika ee ay ka xoog badan tahay - Caasimada Online
Home Warar Awoodda Ciidanka Somalia: Wax ka ogow dalalka Afrika ee ay ka xoog...
Awoodda Ciidanka Somalia: Wax ka ogow dalalka Afrika ee ay ka xoog badan tahay
Wargeyska ka faallooda awoodaha milatari ee dalalka caalamka “Golobal Firepower ayaa sanadkan 2021-ka soo saaray liis uu ku xusay sida ay waddamada u kala awood badan yihiin, si gaar ahna qaaradda Afrika ayuu kasoo xushay 35 waddan.
Sidii badanaaba ay horay u ahaan jirtay, Soomaaliya ma aha dalka ugu hooseeya liiskaas, inkastoo aysan ka muuqanin kaalmaha ugu wanaagsan.
Masar ayaa ah waddanka militari ahaan ugu awoodda badanqaaradda Afrika, waxaana ku xiga dalalka Aljeeriya iyo Koonfur Afrika.
Dalalka Nigeria, Morocco, Itoobiya, Angola, Liibiya, Tuniisiya iyo Suudaan ayaa sida ay isugu xigaan u buuxinaya 10-ka waddan ee ugu milatariga fiican qaaradda Afrika.
Inkastoo ay jiraan dalal ay awoodda militariga aad isugu dhawyihiin, farqi sidaas u weynna uusan u dhaxeynin – sida Sierra Leone, Gabon iyo Afrikada Dhexe, haddana waddanka ku yaalla cirifka ugu dambeeya ee geeska Afrika, Soomalaiya, ayaa ku jira kaalinta 34-aad.dd
Soomaaliya ayaa militari ahaan dhinac walba uga awood badan waddanka Liberia, oo ku jira kaalinta ugu dambeysa ee 35-aad.
Hase yeeshee, waxaa xusid mudan in la sheegay 35 waddan oo kaliya, halka dalalka Afrika ay ka badan yihiin 50 waddan. Taasi micnaheeda waa in dalalka aan liiska lagu soo darin aysan militari ahaan u dhisneyn.
Halkaasna waxaa ka cad in Soomaaliya iyo Liberia labaduba ay ka awood badan yihiin dalalka kale ee Afrika, ee aan liiskan xogtooda lagu sheegin.
Liiska 35-ta waddan ee Afrika iyo sida ay u kala horreeyaan
Jamhuuriyadda Dimuqraaddiga ah ee Kongo
Awoodda militari ee Soomaaliya
Tirada ciidanka milatariga Soomaaliya ee hadda shaqeeya waa qiyaastii 20,000 oo askari, sida lagu xusay warbixinta wargeyska Global FirePower. Ma jiro ciidan keyd u ah milatarga Soomaaliya